थर्मल सूचक स्टीकरहरू, तापमान संवेदनशील स्टिकरहरू - क्रिस्टल कोड टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
थर्मल सूचक स्टिकरहरू
थर्मल सूचक स्टिकर (5)
थर्मल सूचक स्टिकर (8)
थर्मल संकेतक स्टिकर (3)
तापमान सूचकांक स्टिकरहरू, तापमानको रूपमा दृश्यात्मक रूपमा। धेरै फायदाहरू छन्, जस्तै धूल-प्रूफ, पनरोक, सुविधाजनक, छिटो अन्न सही, आदि। थर्मोपेंन्ट पाना अर्कै छ। मेमोरी प्रकार्यको साथमा, कर्मचारीको स्थितिमा सही तापमानको सम्झौता गर्न सकिँदैन, विचलन पछि स्थायी हुनेछ।
अस्थायी सूचक स्टिकर स्वयं चिपकने वाला पेपर जस्तै छ, स्टिकरको पछाडि मा मापन बिन्दु टाँसिएको छ। रंगको अपरिवर्तनीय तापमान को एक नयाँ क्लास हो जुन संकेत परिवर्तन को उत्पादन overheating को संकेत गर्दछ। जब मापा माईकिएको तापमान मूल्याङ्कन तापमान भन्दा माथि छ .डिस्कोलिंग अस्थायी सूचक स्टिकरले मूल सेतो बाट ब्ल्याक हेराइमा घुमाउँछ। र सधैंको लागि कालो राख्नुहोस्।
पीवीसी संश्लेषण सामाग्री, विशेष तापमान संवेदनशील सामाग्री
अपरिवर्तनीय (50 ℃ भन्दा बढी)
गैर-अपरिवर्तनीय (45 ℃ - 180 ℃), एकल तापमान या संयोजन धेरै तापमान।
उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरौं। जस्तै विद्युत कनेक्टर, ट्रांसफॉर्मर, बसबारी, मोटर्स, बीयरिंग, मेकानिकल उपकरण, कपडा हट प्रेस, मुद्रण र रंगाई र प्लेट बनाउने। र व्यापक रूपमा अवसरको प्रयोग थर्मामीटर तापमानको माप प्रयोग गर्न सक्दैन र मात्र थाहा छ कि कति तापमान भन्दा बढी हुन्छ। अस्थायी स्टुटरको आवेदन, अवरक्त थर्मामीटर र सम्पर्क थर्मामीटरको कमीको लागि बनाउनुहोस्। यो गलती "गोरखापत्र" को रूप मा उत्तेजित भयो। बस टेम्पलेचर सूचक स्टिकर विच्छेदशाला को सर्वेक्षण गर्छन। त्यसपछि जटिल र समय-उपभोग गर्ने तापमान कार्य पूरा गर्न।
1. स्टिकर रङ परिवर्तन हुनेछ जब तापमान परिवर्तनको लागि पोइन्टमा पुग्छ। हीट संवेदनशील रङ परिवर्तन स्टिकर, हात संवेदनशील रङ परिवर्तन हुँदैछ, र चिसो संवेदनशील रङ स्टिकर उपलब्ध छ। यो तापमान मापन गर्न कप, मग, फ्रिज, बोतलें आदि मा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
2. यो सजिलैसँग क्यालेपरमा स्टिकर लागू गरेर ब्रेक क्यालपरको तापमान सजिलैसँग मापन गर्न सम्भव बनाउँछ
ओभरहेटिंग बाट क्षति कम गर्न मद्दत गर्दछ, र उचित तापमान व्यवस्थापन अभ्यास गरेर अग्रिम अनियमितताहरू समात्नुहोस्।
विस्तृत तापमान माप दायरा 149 ℃ ~ 260 ℃ ले सडक र प्रयोग दुवै प्रयोगको लागि यो सम्भव बनाउँछ
एक अपरिवर्तनीय रङ परिवर्तन सामग्री प्रयोग गर्दछ जसले अधिकतम तापमानमा पुग्छ
हालैको सर्वेक्षणको अनुसार लगभग 10 प्याकेजहरूमा एकजना क्षतिग्रस्त भयो। प्रभाव क्षति अक्सर स्पष्ट रूपमा देखिने हुन सक्छ, तथापि तापमानको कारणले गर्दा पहिचान हुन सक्छ र विशेष गरी हानिकारक हुन सक्छ जब खाना वा दबाइ औषधि जस्ता सामानमा नपढिएको हुन्छ। यसैले, तापमान संवेदनशील वस्तुहरू डेलिभर हुँदा तपाईंको ढुवानी विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। एक ShockWatch तापमान सूचक स्टिकर एक लागत प्रभावी समाधान हो कि यो सुनिश्चित गर्न को लागि तापमान संवेदनशील पार्सल अवांछित वितरित गरिन्छ।
4.A स्टिकर-प्रकार छाला-सतहको तापमान सूचक, जापानमा व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध छ, प्रतिस्थापन अंकहरूमा तापमान परिवर्तनको निगरानी गर्न प्रयोग गरिएको छ। क्लिनिकल अनुप्रयोगमा, लेखकहरूले यी केही उपकरणहरूमा थुप्रै कमजोरीहरूको मूल्यांकन गरे। उदाहरणका लागि, स्पष्ट रूपमा देख्न संख्याहरूका लागि 10-मिटर व्यास सूचक धेरै सानो छ। 18-mm व्यास सूचक प्याच लुगानमा प्याच गर्न ठूलो छ। यस उपकरणलाई सुधार गर्न लेखकले 18-mm व्यास सूचकबाट मात्र 33 नम्बर प्रयोग गरे र यसलाई धेरै अध्ययन विषयहरूमा लागू गर्यो। प्रतिस्थापन अंकको परिसूचक स्थितिको बारेमा निर्णय सूचक रङ्गको आधारमा बनाइन्छ। 18-mm व्यास सूचक, अब केवल संख्या 33 प्रयोग गर्न परिमार्जित, सबै लेखकहरूको डिजिटल प्रतिस्थापनका लागि सामान्य प्रयोगमा छ। क्लिनिकहरु को महत्वपूर्ण तापमान परिवर्तनों को देखने को क्षमता को रूप मा राम्रो तरिकाले सुधारिएको छ, यहां सम्म कि गरीब प्रकाश को स्थितिहरु लाई पनि।
5.6 विस्तृत संख्याहरू सही तापमानलाई तुरुन्तै हेर्नको लागि तापमान परिवर्तनको रूपमा हल्का बनाइन्छ।
यो आत्म चिपकने वाला तापमान पट्टी बस तपाईंको किण्वन बाल्टी, बैरल, किग, डेमिजोन आदि को लागी निरन्तर तापमान पढने को लागि चिपकन्छ।
तापमान थर्मामीटर ब्याक साधारण गोंद वा3एम ग्लू व्यवहार गर्दछ जुन सबै प्रकारको कार्डमा संलग्न हुन सक्छ, बुकमार्कका लागी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आफ्नो बेंच सजिलै संगै सजिलै अनुगमन गर्नुहोस् कि तपाइँका खमीरहरू उनीहरूको आदर्श तापमानमा काम गरिरहेका छन्।
तपाईंको सबै किरिन्थिङ भाँडाहरूमा एक टाँस्नुहोस्।
6. तरल क्रिस्टल माथे थर्मामीटर पट्टी तापमान जाँच गर्न सुरक्षित, सजिलो र सही तरिका प्रदान गर्दछ। थोरै थर्मामिटरले दुवै अङ्कद्वारा दृढतापूर्वक समात्नुहोस्, र 15 सेकेन्डको लागि सुक्खा माउन्टको विरुद्धमा राख्नुहोस्, माथे हेडमिटरमा अझै पनि अगाडि हेराइमा राख्नुहोस्। हरियो रंगले सही तापमानलाई संकेत गर्दछ। यो सस्तो र उत्तम छ। यो राम्रो प्रचारक उपहार हो।
7. बुखार सूचक स्टिकर एक सुविधाजनक, फ्रस फ्री स्टिक-मा बुबर सूचक हो जसले आमाबाबुलाई 72 घण्टा सम्मको लागि आफ्नो बच्चाको बुखार वा तापमान निरपेक्ष रूपमा निगरानी गर्दछ। तपाईंको बच्चाको माथेमा मात्र रंगीन स्टिक-अन बम्बल बीट हेर्दै, तपाइँ सजिलै दिन आफ्नो तापमान निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिकर तपाईंको बच्चाको लागि सजिलो, सुरक्षित र रमाइलो हुन्छ।
तापमान सूचकले 36 डिग्रीमा 'एन' देखाउनेछ, वा तपाईंको बच्चालाई बुखार छ भने, 'एन' गायब हुनेछ र 37,38,39,40 डिग्री सूचकले बुखारको गम्भीरतालाई आधारमा देखाउनेछ।
कुनै पारा, कुनै गिलास, गैर विषैले! जेब आकार, घर वा यात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
8 प्रयोग गर्न सजिलो र पढ्न सजिलो।
तपाईंको माछा टैंकको तापमान, तपाईंको DIY ब्रो बीयर र वाइन बैरल, टेरारियम, ग्रीनहाउस, भिभारीम र कुनै पनि प्रकारका पाल्पा ट्याङ्क, वा तपाईंको घरमा कुनै पनि स्थान मापन गर्नुहोस्।
तपाईंको माछाको स्वास्थ्यको लागि सही पानीको तापमान धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईंको बियर र शराब दाँया पाउनुहोस् वा भान्सामा वा घरको वरिपरि तापमान प्रयोग गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
स्थापना गर्न सजिलो, स्टिकरको पछाडि बसोबास र अगाडिको पारदर्शी सुरक्षा फिल्म छर्नुहोस् र यसलाई एक्वैरियमको बाहिरको पर्खालमा राख्नुहोस्, यो हो।
कुनै ब्याट्री र चक्र कपको बारेमा चिन्ता छैन।
सुरक्षा आवाज ह्यालोग्राम लेबल
CCKP080 नेल गहने स्टिकर